ULampard uxoshiwe njengomqeqeshi weChelsea | Scrolla Izindaba
ULampard uxoshiwe njengomqeqeshi weChelsea
IChelsea isixoshe umqeqeshi wayo uFrank Lampard kanti bese bevele sebekhombe uThomas Tuchel owayengumqeqeshi weParis Saint Germain ozongena esikhundleni sakhe. ULampard uxoshwe ngemuva kwamahora angama-24 enqobe iLuton Town ngamathathu kwelilodwa emzuliswaneni wesine we-Emirates FA Cup.
Kodwa ukungenzi kahle kwamaBlues kwi-English Premier League yikhona okukhathaza kakhulu abaphathi.
Isitatimende esithunyelwe yiqembu ngoMsombuluko sithe: “Imiphumela nokudlala akuhlangabezananga nalokho okulindelwe yikilabhu, okushiye ikilabhu iphakathi kwetafula ngaphandle kwendlela ecacile yokuthi izothuthuka kanjani.”
Lo mdlali oneminyaka engama-42 ubudala uthathe izinyanga eziyishumi nesishiyagalombili kuphela njengomqeqeshi weqembu selokhu ethathe izintambo kuMaurizio Sarri ngowe-2019. Ngesizini yakhe yokuqala kuChelsea wenze kahle njengoba eholele ikilabhu kowamanqamu we-FA Cup waphinde waholela iqembu kwisizini ye-UEFA Champions League.
Izinto nokho zishintshe kakhulu kuyena kule sizini futhi ukuhlulwa ngamaqembu anjengoArsenal, iManchester City neLeicester City kumlahlekisele ngomsebenzi. IBlues njengamanje isendaweni yesi-9 kwi-Premier League, ngamaphuzu ali-11 ngemuva kwabaholi be-log iManchester United.
Njengomdlali uLampard uhlala engomunye wabadlali abaphumelele kakhulu e-Stamford Bridge. Wayengukaputeni futhi ungumshayimagoli ohamba phambili ngamagoli angama-147 emidlalweni engama-429 emsebenzini wakhe weminyaka eyi-13 nale kilabhu.
Umnikazi weChelsea, uRoman Abramovich ukuthathe wakubeka kuyena ukuphawula ngokuxoshwa kukaLampard, nokuyinto lomRashiya angakaze ayenze phambilini ngensikhathi ikilabhu ixosha umqeqeshi wayo. Phambilini lo msebenzi wokuphawula ngokuqashwa nokuxoshwa kwabaqeqeshi ubuzosala kowayengumqondisi wezobuchwepheshe uMichael Emenalo nomqondisi uMarina Granovskaia.
UAbramovich uthe: “Lesi bekuyisinqumo esinzima kakhulu ekilabhini, futhi ngoba nginobudlelwane obuhle kakhulu noFrank futhi ngiyamhlonipha kakhulu. Uyindoda eqotho futhi unemithetho yokuziphatha ephezulu kakhulu. Kodwa-ke , ngaphansi kwezimo ezikhona njengamanje sikholwa ukuthi kungcono ukushintsha abaphathi.”
IChelsea izobhekana namaWolves ku-Premier League ngoLwesithathu ebusuku ekhaya ngehora le-8 ebusuku.